परनिर्भरता र नेपालको लकडाउन
१३१३ पटक पढिएको
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एउटा भिडियो चित्रमा एकजना इटली महिला रुँदै मानव समुदायलाई अपील गरिरहेकिछिन्,Stay home, stay home, please stay home.एक दिनमा आठ–आठ सय इटली नागरिकको मृत्युु देखेकी महिला भन्छिन्, ‘महामारीले राष्ट्रियता, जाति, रंग, भाषा.... केही देख्दैन ।’ बडो हृदयविदारक छ भिडियो । विश्व आज सांघुुरिएको छ । पृथ्वी नै एउटा बस्तीको रूपमा देखिएको छ– Global Village बनेको छ पृथ्वी । साझा समस्यासँग सवै गम्भीर भएर लडिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रियवाद र मानवतावाद आज सवैको हृदयमा समान रूपले बसेको छ । मानवतालाई जोगाउनु सवैको चासोको विषय बनेको छ । महिला आफ्नो नातेदारलाई अपील गर्दै रोएकी होइनन्, महिला त सम्पूर्ण मानव सभ्ययता जोगाउन मानव समुदायलाई गुहारिरहेकी छिन्, ‘घरमै बस्नुहोस्, घरमै बस्नुहोस्, प्लीज !’
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट सिर्जित समस्याले सम्पूर्ण विश्व नै चिन्तित र भयभित छ । सम्पूर्ण मानवता नै भयङ्कर विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । अमेरिका, यूरोप, चीन, अरब राष्ट्रजस्ता विकसित देशहरू स्वयं यस महामारीको चपेटामा परेर ठूलो स्वास्थ्य सङ्कट सामना गर्दै आर्थिक सङ्ककटको भूमरीमा डुुब्दै गएको छ । विश्वका लगभग सम्पूर्ण देशहरूमा सङ्क्रमण फैलिसकेको छ । यस परिवेशमा नेपालजस्तो गरीब देशको अबस्था के हुने हो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
हाम्रा पाँचौं चुनौतिः नेपालमा लकडाउन भएको आज तेह्रौं दिन बितिरहेको छ । एक हप्ता अबधि लकडाउन सकेर दाश्रो हप्ता पनि सकिनै लागेको छ । यो लकडाउनको अबधि यति नै हुने भन्ने हुँदैन । यसको अबधि जहिले पनि अनिश्चित नै हुन सक्ने देखिन्छ । यस परिवेशमा पाँचवटा कुरा महत्वपूर्ण देखिन्छन्– पहिलोःलकडाउन लम्ब्याई घरमै बसेर भाइरसलाई जित्ने चुनौति; दोस्रोः लकडाउनको समयमा आम जनताको दीनचर्या कसरी चल्ने चुनौति; तेस्रोः सङ्क्रमित व्यक्तिको उपचारमा आउने चुनौतिहरू; चौथोः विभिन्न मुलुकमा काम गरिरहेका प्रवासी नेपालीले भोग्ने समस्याको निकास र पाँचौंःसङ्क्रमणसँग जितिसकेपछिको जर्जर आर्थिक अबस्थासँग सामना गर्दै सामान्य अबस्थामा मुलुकलाई फर्काउन गर्नुपर्ने पुनर्निर्माण सम्बन्धी चुनौति । यी पाँचवटै चुनौति नेपालजस्तो गरीब देशको लागि महाचुनौति हुन् ।
लकडाउनः हालसम्म विश्वमा सङ्क्रमण घट्दो होइन, बढ्दो नै देखिन्छ । अमेरिका, यूरोपका देशहरूमा यसको प्रभाव अझ बढ्दो नै छ । चीनमा मात्र घट्दो सङ्क्रमण देखाएको छ । विश्वको अधिकांश भूगोलमा लकडाउन चलिरहेको छ । सङ्क्रमितको संख्या घट्दै गएर शून्यमा नपुुगुुञ्जेल लकडाउनको अबस्थामा बस्नु आवश्यक हुनेछ । अर्थात् लकडाउनको स्थिति अनिश्चित छ । नेपालले भारतसँग समानान्तरीय रूपमा लकडाउन गर्नुपर्नेछ । खुला सीमा र आवतजावतले यो बाध्यात्मक स्थितिको सिर्जना भएको हो । के भारतको तुलनामा लामो अबधिको लकडाउन नेपालले धान्न सक्नेछ त ? लकडाउनको सम्बन्धमा यो सवाल निकै जटिल छ ।
चीन, भारत र सङ्क्रमणको जोखिमः कोभिड–१९ को एपी सेन्टर चीनको हुुआन शहर बन्यो । चीनले महामारी झेल्दै लकडाउन गरेर र हाई अलर्ट चिकित्सक टोलीहरू खटाउँदै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । चीनमा सङ्क्रमितको संख्या कम हुँदै गएको छ, मृत्युु पनि हुन छोडेको छ । भारतमा पछिल्लो समयमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ र मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।
चीन र भारत हाम्रा दुुई विशाल छिमेकी राष्ट्रहरू हुन् । उत्तरतर्फको चीनले सङ्क्रमणको संख्यालाई न्यूननिकरण गरिसक्यो । चीनसँग हाम्रो खुल्ला सीमा छैन, जोडिएका नाकाहरू कम छन्, भौगोलिक बिकटताले गर्दा मानिसहरूको आवतजावत कम छ । यसरी चीनसँग नेपाललाई जोखिम कम छ । तर, दक्षिणतर्फको छिमेकी भारतसँग नेपालको नाकाहरूको संख्या धेरै छ, खुला सीमा छ, आवतजावत बाक्लो छ; भारतमा सङ्क्रमण बढ्दो छ । यसरी भारतसँग हाम्रो जोखिम सबभन्दा बढी छ ।
चीन, भारत र आपूर्तिः नेपाल परनिर्भर र भूपरिबेष्ठित मुलुक हो । नेपालमा उपभोगका लागि आउने अधिकांश बस्तु भारत र चीनबाट आपूर्ति हुने गर्दछन् । अहिले पनि दैनिक उपभोग्य बस्तुुदेखि अन्य कुराहरूको अधिकांश आपूर्ति यिनै दुुई मुलुकबाट हुने हो । यी दुुई देश आफैं महामारीको चपेटामा छन् । अमेरिकाको एक मैगेजिनमा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार भारतमा करोडौं मानिसहरू कोरोनाको सङ्क्रमणको शिकार हुने अनुमान छ । भारत पूर्ण रूपमा लकडाउनमा छ । उसको लकडाउन अझै लम्बिन्छ । लकडाउनले गर्दा उसको उत्पादन ठप्प छ । चीन पनि आंशिक लकडाउनमा छ । चीनबाट हुने आपूर्तिमा पनि हामी भारतमाथि निर्भर छौं । चीनको सामुद्रिक बन्दरगाह पनि भारतसँग नै जोडिन्छ । चीनको स्थलमार्गबाट हुने न्युन आपूर्तिले हामी धेरै दिन धान्न सक्दैनौ पनि । त्यस्तै अन्य मुलुकबाट हुने आपूर्तिमा पनि हामी भारतमाथि नै निर्भर छौं । सवैको बन्दरगाह भारतसँग नै जोडिन्छ । यसरी दैनिक रूपमा हुने आयातमा हामी लगभग पूर्ण रूपमा भारतमाथि निर्भर छौं । पारवहन, आयात–निर्यात र उत्पादनसँग जोडिएको विषयमा जाँदा नेपालले आपूर्तिको ठूलो अभाव झेल्नुु पर्ने अबस्था कुनै बेला पनि सिर्जना हुन सक्दछ । हाम्रो स्टकले हामी कति समयसम्म धान्न सक्छौं ? हामीसँगको स्टक क्षमता निकै कमजोर छ । हाम्रो राष्ट्रिय स्टकमा धेरै मालसामानको उपलब्धता छैन । २–३ महिनाभन्दा बढी हाम्रो स्टकले धान्न पनि सक्दैन । तसर्थ, लकडाउन लम्बिने अबस्थामा हाम्रो जनजीवन झन् समस्याग्रस्त हुने अबस्था छ । एकातिर भारतसँगै हाम्रो लकडाउन समानान्तरीय हुनु आवश्यक छ भने अर्कोतिर भारतमा उत्पादन बन्द हुनुले हाम्रो आपूर्तिको बैकल्पिक व्यबस्था गर्न हाम्रो सरकार सफल होला भन्ने अबस्था छैन । पूरै विश्व नै लकडाउनमा गएको बेला बैकल्पिक व्यवस्था झन् जटिल त छ नै ।
उपचारसंग जोडिएको विषयः स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको हाम्रो भौतिकपूर्वाधार कमजोर छ । अन्य देशमा जुन आकारमा महामारी फैलियो त्यो आकारमा हाम्रो देशमा सङ्क्रमण बढ्यो भने यसले अनियन्त्रित परिस्थितिको सिर्जना गर्न सक्दछ । हामीसँग न त्यस आकारमा अस्पतालहरू छन्, न उपलब्ध अस्पतालहरूमा उपकरणहरू छन् र न हामीसँग त्यति ठूलो संख्यामा चिकित्सक, सह चिकित्सकहरू छन् । औषधि र अन्य केमिकलहरूको आपूर्ति आफैमा जटिल छँदैछ । सरकारले यसको तयारी कुन स्तरमा गरेको छ ? के बिकल्पहरू छन् सरकारसँग ?
जनजीवनको व्यवस्थापनः पहिलो चरणकै लकडाउनले गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको जनजीवन निकै कष्टमय बनिसकेको थियो । दास्रो चरणमा स्थिति झन् नाजुक बनिसकको छ । बिपन्न ज्यालादारी मजदुरहरूको अबस्था निकै दयनीय छ । सीमान्तकृत समुुदाय र दलित बस्तीहरूका जनता पैसा नभएर खाद्यान्नको अभावले भोकमरीको शिकार हुन थालेका छन् । महंगी बढेको छ । खाद्यान्नको अभाव छ । औषधिमुलोको अभाव छ । कालोबजारी शुरु भएको छ । लुटमार र अराजकता बढ्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । सरकारले लकडाउनको अबधि बढाएसँगै जनतालाई बिभिन्न सहुलियत दिनु र बिपन्न जनताको दैनिकी चल्ने गरी उद्धारको व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । त्यसो हुन नसकेको खण्डमा सङ्क्रमणभन्दा भयावह भोकमरी र त्यसबाट सिर्जित अबस्था हुन जान्छ । अझ स्थानीय तहमा जाने उद्धारका सामाग्रीको वितरण व्यवस्थापन आफैंमा जटिल कार्य हो । केही समयअघि गृहमन्त्रीले भनेका थिए कि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गरियो भने स्थानीय तहहरू नै खाली हुनेछन् । यो सामान्य विषय होइन । भोलि सरकारले पठाउने उद्धारको व्यवस्थापनमा व्यापक अनियमितता हुने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस प्रकारको अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रसमेत सरकारले उद्धार बजेट बिनियोजन गर्यो भने यो प्रभावकारी हुुनेछ अन्यथा यसले भ्रष्टाचार मौलाउनेछ र अराजकतालाई प्रश्रय मिल्ने छ ।
प्रवासी नेपालीको व्यवस्थापनः नेपालको कुल जनसंख्याको एकतिहाइ हिस्सा भारत र अन्य देशहरूमा छरिएर रहेका छन् । अर्थात् झण्डै ८०–९० लाख जति नेपाली प्रवासमा छन् । यो जनसंख्या सक्रिय जनसंख्या पनि हो । यसले अर्थ जेनेरेट गरिरहेको छ । तर, विश्वव्यापी महामारीको यस विश्व संकटमा जहाँ ती नेपालीहरू काम गर्दछन् त्यहाँको स्थिति बिग्रँदै गयो भने यसले हामीलाई ठूलो संकट थपिने देखिन्छ । खास गरी खाडी मुलुकहरूमा सवभन्दा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरू काम गर्दछन् । ती देशहरूमा पनि सङ्क्रमण बढ्न थालेको छ । ती मुलुकहरूमा पनि लकडाउन घोषणा हुन थालेका छन् । ती देशहरूमा कम्पनीहरूले कामदारहरूलाई पाल्नु सजिलो छैन । काम नगराई तलब, खाना, आवासीय सुविधा, औषधिउपचार आदि उपलब्ध गराउनु नीजि कम्पनीहरूका लागि सहज हुने छैन । यसले हामा प्रवासीहरूलाई विषम परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय देशहरूले उनीहरूलाई कुनै बेला पनि देश फर्कने आदेश जारी गर्न सक्दछन् । कतिपय नेपाली प्रवासीहरू पनि त्यहाँ सङ्क्रमणको शिकार होलान्, मृत्युवरण गर्लान् । प्रवासमा हुने यस जटिल परिस्थितिको सामना नेपालले कसरी गर्ला यो पनि निकै महत्वपूर्ण विषय हो । सरकारको ध्यान यता पनि जाओस् ।
मानव सभ्यता रक्षाप्रतिको चिन्ताः मानवसभ्यता नै जोखिममा त छैन भन्ने सवाल पनि उठ्ने गरेको छ । एउटा सूूक्ष्म जीवाणुले मानव सभ्यतालाई नै चुनौति दिएको अबस्थामा मानव आफ्नो सभ्यता जोगाउन पनि उत्तिकै चिन्तित छ । विश्व एक बस्ती हो र मानवले मानव सभ्यताको बिरुद्धमा कुनै काम गर्नु भनेको मानव सभ्यताकै अन्त गर्नु हो भन्ने कुराको पाठ यस कोरोना घटनाले मानव समुदायलाई अबगत गराएको छ । अहिले सम्पूर्ण विश्व एउटा समाधानको खोजीमा छ । यसले मानव एकताको नयाँ युुगको प्रारम्भ गर्न सक्दछ । यसले मानव समुदायको अन्तर्राष्ट्रियवाद र मानवतावादलाई थप मजबुत गरेको छ । (लेखक पूर्व मन्त्री हुन् ।)